Fanamelohana ho faty ho an'ny olona mitovy nefa mifanambady dia araka ny Soratra Masina | Apg29
Manao izany izy ny amin'ny finoana kristianina. Fa mazava ho azy tanteraka izany tsy araka ny Baiboly.
Ireo izay manaiky an'i Jesosy dia ho voavonjy sy voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny fahasoavan 'Andriamanitra dia tsy misy tsy misy amintsika no ho voavonjy ka namonjy. Milaza ny Baiboly fa samy efa nanota ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra.
Fanamelohana ho faty ho an'ny olona mitovy nefa mifanambady ao Oganda
Ny tontolo ankehitriny dia manoratra fa mitaky Oganda no indray ny fanamelohana ho faty ao amin'ny utlevd lehilahy miray amin'ny lehilahy. Manao izany izy ny amin'ny finoana kristianina. Fa mazava ho azy tanteraka izany tsy araka ny Baiboly.
Raha teraka indray ny Kristianina, izy ireo hahatakatra fa izao mampihatra ny Filazantsara sy ny fahasoavana ao amin'i Jesosy fa tsy ny didy ao amin'ny Testamenta Taloha.
Lehilahy miray amin'ny lehilahy no tsy ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny firenena ao amin'ny kaontinanta Afrikana. Ao amin'ny firenena vitsivitsy mivory pelaka fiainana am-ponja na fanamelohana ho faty. Tany Ouganda, ankehitriny mandra-pahafatiny ho an'ny pelaka firaisana ara-nofo.
Jesosy tsy tonga hanameloka na iza na iza ho faty. Tonga Izy mba hamonjy sy hamonjy ny olona.
John 3:16. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, izay rehetra mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay. 17. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao fa ny mba ho voavonjy amin'ny alalany .
Jacob Rudenstrand no Mpanampy ny Sekretera Jeneralin'ny soedoà Evangelical Alliance . Tao amin'ny Twitter, dia nanoratra hoe:
"Izao no lalàna tsy ara-drariny izay mifanohitra amin'ny filazantsaran'ny fahasoavana."
Dia tsy maintsy manaiky. Tadidinao ve ny zava-nitranga tamin-dravehivavy, izay nihaona tamin'i Jesosy rehefa efa nijangajanga? Noho izany izy dia norahonana nitoraham-bato, nefa inona no nitranga?
Jaona 8: 2 Fa nony maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray, ary ny vahoaka rehetra nanatona Azy. Dia nipetraka nampianatra azy.
3. Ary nitondra ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo taminy ny vehivavy anankiray azo nijangajanga. Ary rehefa napetrany teo afovoany, 4 dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivavy ity tratra tao amin'ny asa fanitsakitsaham-bady. 5 Ary Mosesy nandidy anay teo amin'ny lalàna, izay toy izany dia tokony hotoraham-bato. Fa inona no ho lazainao?
6 Fa izany izy ireo mba hizahany toetra azy, mba hahazoany izay zavatra izay hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany. 7 Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitsangana ka nanao taminy hoe: ny anankiray aminareo izay tsy nanota hitora voalohany bato azy. 8 Ary Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany.
9. Ary rehefa nandre izany, ary nahatsapa ho voampanga ny feon'ny fieritreretana, dia lasa nankany tsirairay, ny anti-panahy voalohany, ka hatramin'ny farany, ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy nitsangana teo anatrehany izy.
10. Ary Jesosy nitsangana ka dia tsy nahita na iza na iza afa-tsy an-dravehivavy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, aiza ireny mpiampanga? Tsy nisy nanameloka anao?
11. Hoy izy: Tompo ô, no. Hoy Jesosy taminy: Izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana, ka aza manota intsony.
Jesosy aza tsy mitsara lehilahy miray amin'ny lehilahy
Toy ny tsy voaheloka i Jesosy ny vehivavy izay nanao ny fahotana lehibe toy ny fanitsakitsaham-bady izy, na mpitsara ireo izay manao ny fahotana lehibe ny lehilahy miray amin'ny lehilahy. Kosa, dia manome azy ireo ny famonjena sy ny famonjena. Jesoa no izany, isika izay voavonjy koa ny hanolotra azy ireo ny famonjena, ary ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy.
Ao amin'ny Testamenta Taloha dia milaza amin'ny fanamelohana ho faty noho ny fahotana isan-karazany, nefa tsy ao amin'ny Testamenta Vaovao araka ny nandraisantsika ny reconciler - i Jesosy Kristy. Ary nalainy avokoa ny fahotana wart ka nandray ny fanamelohana ho faty eo amin'ny toerana mba hamonjy antsika amin'ny fahafatesana. Noho izany, dia fahasoavana no namonjena rehefa mandray an'i Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Ary ny fahagagana mitranga - no hamonjena antsika, ary famelan-keloka.
Ateraka Indray mitsara koa ny tsy fahafatesana
Ny tena Kristiana nateraka indray mpitsara tsy ho amin'ny fahafatesana, fa manao ny zava-drehetra mba hamonjy azy amin'ny fitsarana amin'ny alalan'ny fanolorana an'i Jesosy izy mba handray Azy mba ho voavonjy sy ny voavonjy.
Amin'ny finoana silamo, misy firenena sy ny vondrona izay mamono olona mitovy nefa mifanambady. Fa toy izany koa isika izay voavonjy sy ny famelan-keloka noho ny finoana an'i Jesosy. Manana an'i Jesoa no Mpanavotra antsika. Efa naka ny fahotantsika sy nampihavana antsika amin'Andriamanitra. Fa ao amin'ny finoana silamo, tsy misy Mpanavotra. Aiza ny lalàna henjana sy tsy misy indrafo.
Noho izany rehefa nanao hoe: tiako ny mampahatsiahy fa misy fitsarana - ny didim-pitsarana farany. Izany dia avy eo ny meloka tokony hotsaraina izay tsy izy ireo, fa voavonjy Jesosy. Fa fitsarana ity mitranga aorian'ny Arivotaona, rehefa maty ireo izay tsy manam-pinoana an 'i Jesoa dia hitsangana mba hohelohina ho lasa taloha kelin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Koa mazava ho azy fa lehibe ny tsy manana Jesosy.
Fa ankehitriny, amin'izao vanim-potoana avy ny Filazantsara ny fahasoavana mbola. Ankehitriny, ny olona mbola manana fahafahana hanaiky an'i Jesosy ary ho voavonjy ka namonjy. Satria Jesosy nandray ny sazy rehetra, raha maty ho azy ireo tao Kalvary.
Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ankehitriny, dia afaka mandray ny velona sy nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, ary ho voavonjy!
Mendrika ny ho faty?
Fa tsy ao amin'ny Testamenta Vaovao fa ny olona mitovy nefa mifanambady mendrika ny fahafatesana? Eto dia toy ny zavatra hafa rehetra. Tsy maintsy tsy dislodge zavatra, hanova ny lahatsoratra fahatsiarovan-tena na ny tsy nahy sy tsy araka ny Baiboly maimaika hanao fampianarana.
Noho izany eto no voalaza ao amin'ny Baiboly:
Rom 1:32. Fantatr'izy ireo ny didy marina fa ireo izay manao azy [miaina amin'ny lehilahy miray amin'ny lehilahy] miendrika ho faty , nefa tsy izany ihany mihitsy, fa izay miombon-kevitra amin'ny mpanao.
Mariho fa tsy milaza fa olona mitovy nefa mifanambady dia tokony hovonoina ho faty. Izany fotsiny izy ireo fa "mendrika ho faty." Ary izany dia mendrika ny olona rehetra, satria isika efa nanota ny rehetra Baiboly. Rehetra afa-tsy Jesosy no nanota. Fa isika dia voavonjy ka voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny Tompo Jesoa Kristy!